eXamYo Mbupu | Zụta Micro Earpiece, Igwefoto na Lelee maka ịghọ aghụghọ ule - eXamYo.com
Maka iwu niile, NA-AHỤGHỊ ỤMỌ NHỊ
» na eXamYo.com mbupu nile na- free n'ụwa niile na anyị nwere 24 hour ụgbọ mmiri na-ebuga ọtụtụ mba.
» A na-ebugharị ụgbọ mmiri anyị sitere na Spain, na-enweghị ego ego ọchụrụ ma ọ bụ ogologo chere.
» Iwu a na-abụkarị zitere n'otu ụbọchị A na-eme ha, nke na-eme ka oge izizi dị mkpụmkpụ.
» A na-eji nlezianya akwakọba ụgbọ mmiri anyị site na iji usoro nchebe kachasị mma ma sie ike, yana ịzụta nke ọma lere ma nwalee site na ndi oru anyi iji hụ na ị na-enweta ihe niile na ọnọdụ zuru oke.
»Ngwugwu nwere uche, na-enweghị akwụkwọ maka ọdịnaya maka nchekwa na ezi uche.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara ozi anyị ma ọ bụ ịchọrọ ịme ajụjụ pịa Ebe a.